Jijona nougat Mousse recette amin'ny Thermomix | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafo135 minitraOlona 6180 kaloria
ny Ana Valdes
La Nougat mousse Io dia hahafahantsika manararaotra ny Jijona nougat (ilay malefaka) ary manana tsindrin-tsakafo mora ihany koa ho an'ny sakafo hariva amin'ny Taom-baovao na ny sakafon'ireo Three Kings. Azonao atao ny manompo azy amin'ny vera na koa mampiasa azy famenoana for Crepes o liom-bavy.
Manana andiana fitakiana izy mba hivoahany tsara: atody amin'ny hafanan'ny efitrano, krema mangatsiaka, vera maina ary fampangatsiahana adiny roa ao anaty vata fampangatsiahana. Ho hitanao ny maha matsiro azy. Ary ho an'ny ankizy tian'izy ireo.
Izy io koa dia a fomba fahandro azonao ampiasaina mba hanomezana ny nougat navelanay tamin'ny Krismasy. Noho izany dia afaka mankafy ny tsirony ianao amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona.
1 Nougat mousse
Jijona nougat mousse matsiro entina samirery na ho famenoana crepes na liona vavy.
Fotoana fiomanana: 2H
Fotoana hiketrehana: 15M
Fotoana manontolo: 2h 15M
Atody 2 (amin'ny hafanan'ny efitrano)
200 ml ny karavasy fikapohana (tsy maintsy mangatsiaka)
200 an'ny Jijona nougat
30 g ny siramamy volontany (mety fotsy koa izy)
Taratasy gelatin 4
Ronono 100 ml (bika iray). Mety ho iray manontolo, semi na skimmed
Apetrakay ao anaty rano mangatsiaka ireo ravina gelatin.
Mampisaraka ny fotsy amin'ny atody atody isika.
Miaraka amin'ny madio sy maina ny vera (zava-dehibe izany mba hametrahana tsara ny fotsy), apetratsika ny lolo ary ampahafantarinay ny fotsy. Izahay mitaingina azy ireo hatrany amin'ny lanezy mandritra ny 2 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 4. Mivoaka izahay ary mitazona ao anaty vata fampangatsiahana.
Diovintsika ny vera, ataontsika maina tsara, apetaho ny lolo indray ary ampidiro ny crème (tsy maintsy mangatsiaka izy, avy amin'ny vata fampangatsiahana. Raha tsy izany dia tsy hipetraka tsara). Izahay dia manao fandaharana hafainganam-pandeha 4, tsy misy fotoana. Rehefa hitantsika fa tafangona io dia vonona. Mivoaka izahay ary mitazona ao anaty vata fampangatsiahana.
Ampahafantarinay ny yolks miaraka amin'ny siramamy ao anaty vera, 1 minitra, amin'ny 37º, hafainganam-pandeha 4.
Izahay dia manampy ny ronono ary manafana ny zava-drehetra 6 minitra, amin'ny 60º, hafainganam-pandeha 1.
Isika manidina ny gelatin ary manampy azy amin'ny vera. Notohantsika nandritra ny fotoana rehetra ny zava-drehetra 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 7. Apetraho ny goblet.
Ampiarahanay amin'ny nougat amin'ny ampahany lehibe ary potehinay indray mandritra izany 30 segondra amin'ny hafainganana mandroso 7/10. Miaraka am-bisy.
Ampio ny crème whipped dia afangaro 1 minitra, amin'ny hafainganana 2.
Araraka ao anaty fitoeran-javatra lehibe ny fangaro ary ampio ny fotsy atody. Afangaro amin'ny sotro lehibe iray, miadana sy miaraka amin'ny fihetsiketsehana mandrakotra mba tsy hamongorana ny fotsy.
Aroso anaty solomaso ary atsofohy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny 2 farafahakeliny.
Fanazavana fanampiny - Crepes, Manaikitra crème
Ampifanaraho amin'ny maodely Thermomix anao ity fomba fahandro ity
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Navidad, Postres
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Nougat mousse
azonao atao ny mampiasa singa roa heny, mety ve izany? dia ilaiko servisy 12
Juanjo dia hoy izy:
Salama, azonao atao ve ny mampiasa avo roa heny ny akora? Satria mila roa ambin'ny folo aho na ratsy tarehy ary tokony hataoko amin'ny andiany roa. MISAOTRA
Mamaly an'i juanjo
Ana Valdes dia hoy izy:
Eny, Juanjo, apetraho ny avo roa heny, mitazona ny fotoana sy ny maripana ary ny hafainganam-pandeha mitovy. Famihinana!
Valiny tamin'i Ana Valdés
Maria allende dia hoy izy:
Tsiro miavaka. Ny hany zavatra dia nisy mazacote iray nivoaka, mavesatra be. Heveriko fa rehefa apetrako ny ravina Gelatin 4 dia matevina be izy io
Valiny tamin'i Maria Allende
Rehefa ampidirintsika ilay crème whipped, tsy maintsy mangatsiaka ilay izy, sa mitovy?
Heverina fa ny ronono sy ny ronono atody dia ho tezitra aorian'ny fampifangaroana ny gelatin sy ny nougat. Ny zavatra hataoko dia: afangaro ny nougat araky ny voalaza ao anaty recette, esoriko amin'ny vera ilay vera. Nangoniko teo am-panomanana sakafo aho ary rehefa afaka minitra vitsy dia hojereko fa nidina hatramin'ny 37 ny maripana ary tohizana amin'ny fomba fahandro. Aza avela elaela koa anefa izy io, satria manana gelatin io dia afaka mikorontana be loatra ary tsy ho azonao afangaro amin'ny ambiny.
Ho hitanao ny harenany !!
Tratry ny KRISMASY!
Loli Arellano Garcia dia hoy izy:
Raha manampy crème whipped aho handravahana, inona no mety ho fotoana mety indrindra, rehefa mitahiry azy ao anaty vata fampangatsiahana na amin'ny fotoanan'ny fanompoana.
Valiny tamin'i Loli Arellano Garcia
Monkfish sy croquette an-dranomasina amin'ny Krismasy